Scarlett Johansson Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha nyika dzakabatana Vatapi venhau Don Lemon Yechecheche Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Don Lemon Biography inokupa iwe ruzivo nezve yake Yemwana Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Yekutanga Mhuri / Root, Upenyu Hupenyu (Chokwadi Ngochani), Mararamiro uye Hupenyu hweMunhu. Zvakare, tinokupai zviitiko zvakakosha muhupenyu hwake, kutanga kubva paaive mwana kusvika paakasimuka kuve mukurumbira.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe we anonyanya kuvimbika TV anchors uye Newscasters paTV. Nekudaro, havazi vazhinji vakaverenga Don Lemon's Biography iyo inonakidza kwazvo. Pasina yakawanda ado, ngatitangei.
Don Lemon Yemwana Wenyaya Nyaya:
Isu tinotanga nenyaya yekuti Don Carlton Lemon akaberekwa pazuva rekutanga raKurume 1 muguta guru reBaton Rouge muLouisiana, US Akazvarwa kuna mai vake, Katherine Clark uye kuna baba vake, Mr Richardson.
Wechidiki Lemon akakurira kumadokero kweguta reBaton Rouge muSuar State. Kwaive kuguta kwaakagara makore ekutanga ehupenyu hwake hwepakutanga achikura pasi pekuchengetwa naamai vake, mbuya pamwe nehanzvadzi mbiri - Yma naLeisa.
Mhuri yaDon Lemon Kubva:
Ichokwadi nekutaridzika kwake, Lemon ndeyeAfrican-American ane mamwe maCanjun / French midzi. Hongu, vabereki vaDon Lemon vese vatema. Zvisinei, mumwe wemadzisekuru ake aive akachena akachena.
Zvakare, kuongororwa kweLemon's DNA bvunzo kwakaratidza kuti ane midzi yemhuri muNigeria, Cameroon, neCongo! Saka nekudaro, hazvina kuipa kutaura kwaari semurume wemarudzi mazhinji.
Kukura Kwemakore aDon Lemon:
Kukura muBaton Rouge, mudiki Lemoni aive mwana wepamberi aive nechinhu chekuda kupfeka zvine hungwaru. Aipfeka masutu kukereke Svondo yega senge mucheche uyezve aitarisira kusvika kwezviitiko zvakasarudzika seIsita kuitira kuti awedzere dzimwe nguo dapper muwadhi yake.
Nhoroondo Yemhuri yaDon Lemon:
Fortunate yeLemon, akakurira mune yepakati-yemhuri mhuri kurongedza. Saka nekudaro, mhuri yake yanga isina matambudziko kumupa nguo dzake dzekusarudza. Kana ivo havana kushaya mari yakakosha kuti vamutumire kunzvimbo dzakanaka dzedzidzo.
Don Lemon yakatanga sei Basa Rake muNhau:
Chekutanga kwemasangano akadai aive Baker High School uko Lemon yaizivikanwa kuti yaive nehungwaru uye yaishuvira. Aive aine zviroto zvekuve mutori venhau panguva yezvidzidzo zvake pachikoro uye ndokuzoenderera mberi kuzova purezidhendi wekirasi pagore rake repamusoro.
Paakapedza chikoro chesekondari, Lemon akazove mudzidzi weLouisana State University asi haana kuzopedzisa zvidzidzo zvake pachikoro chakataurwa. Panzvimbo iyoyo, akazviisa iye amene akanyoresa kuBrooklyn College uko kwaakapedza degree aine degree munhepfenyuro yenhau.
Makore Ekutanga aDon Lemon muUtapi venhau:
Wakanga uchiziva here kuti Lemon akatanga Kudzidzira Zvemabhuku kunyangwe achiri mudzidzi weBrooklyn College? Muchokwadi, akashanda semubatsiri wenhau paWNYW muNew York City. Panguva imwecheteyo, budding mutori wenhau aive akatorwa neFox News uye akashandira ayo eChicago neSt.
Yakanga isati yasvika kumagumo eLemon's koreji kudzidza kuti iye akazove munyori kune veNBC vanobatana muChicago nePhiladelphia. Akaenderera mberi nekutaura seweekend nhau nhau yeWCAU kuPhiladelphia muPennsylvania, WBRC kuBirmingham muAlabama uye akashanda seanchor uye mutori wenhau wekuongorora weKTVI muSt.
Don Lemon's Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Yakazotevera yeVatori venhau kusangana kwavakaona Lemon ichishandira mapuratifomu eNBC nemapurogiramu ayo anosanganisira Iyo Nhasi Ratidza, NBC Husiku Nhau, Weekend Nhasi. Akaita zvakare anchor zvirongwa paMSNBC uye paWMAQ-TV kwaakakunda maEmmys matatu emuno nekuve anoshamisa TV hunhu.
Kuchinja kwebasa rake muJenhau kwakauya muna 2006 paakapihwa basa neCNN semunyori uye vhiki yemanheru anchor yeCNN's Network Newsroom muAtlanta, Georgia.
Don Lemon's Biography - Simuka Mukurumbira Nhau:
Mumakore akatevera, Ndimu zvishoma nezvishoma yakave yakakurumbira yekuvhara imwe yenhau dzakanyanya kuoma dzeUS uye kubvunzurudza vanhu vane mukurumbira. Kuzivikanwa kwake kwakasimukira kusvika pakakwirira paakabuda kunge gay kuburikidza nekuburitswa kwememoir yake Transparent muna 2011. Makore matatu chete akazotevera iye ave muratidziri weCNN Tonight naDon Lemon, akanonoka chirongwa cheTV chakapa TV yakapa chinzvimbo chinoshamisa. sezvo zvaimupa mukana wekubvunzurudza vanhu vane mukurumbira.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora iyi bio, Lemon ndomumwe wevanonyanya kuvimbika venhau vanozivikanwa uye maTV anchor. Iye anozivikanwa zvakanyanya nekutaura kwakasimba kunokakavara mafungiro pamwe nekubata veruzhinji vakuru vakuru uye vezvematongerwo enyika kuzvidavirira muchikamu chake che "Hapana Kutaura Pfungwa".
Ndiani mukomana waDon Lemon?:
Nguva pfupi mushure mekunge Don Lemon abuda muwadhiropu muna 2011, vazhinji vaida kuziva murume uyu muhupenyu hwake. Yakanga isiri iyo kusvika gore ra2018 apo Lemon akabuda pachena pahukama hwake nekugovana kutsvoda nemukomana wake, Tim Malone panguva yeCNN inorarama Evha Idzva Idzva Evha muna 2017. Zvakakosha kuziva kuti Lemon naTim vanonzi vakasangana mu2016.
Tim parizvino mumiriri wezvivakwa ane nhoroondo yakapfuma achishanda semutori wenhau pakati pa2006-2018. Iye anonyanya kuda Lemon uyo waakazvipira kwaari muna Kubvumbi 2019. Fans havagone kumirira kuona mukomana waDon Lemon achive murume wake. Muchato wakadai waizoona Lemon ichiva mumwe wevashoma vanohura ngochani varume vatema mukutepfenyura kuri mubatanidzwa zviri pamutemo.
Hupenyu Hwemhuri hwaDon Lemon:
Tim Malone haasi iye ega munhu ane nzvimbo yakakosha mumoyo wemuterevhizheni. Tinokuunzira chokwadi nezvevabereki vaDon Lemon, hama nehama.
Nezve baba vaDon Lemon:
Baba vemuratidziri vanongozivikanwa saVaRichardson. Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezvake zvakanyanya nekuti akarasikirwa nehupenyu hwake nechirwere cheshuga apo Lemon aingova mwana. Nekudaro, mutori wenhau anoita napose paanogona napo kusimudzira ruzivo nezve chirwere cheshuga. Zvinopera pasina kutaura kuti baba vaLemon vaive Munhu akanaka nekuti muparidzi weTV ane ndangariro dzakanaka pamusoro pake.
Nezve amai vaDon Lemon:
Katherine Clark pasina mubvunzo munhu wepedyo kune moyo waDon Lemon. Muchokwadi, akaita netsaona akatanga imwe yake yekuratidzira na "Hi Amai". Aive Katherine akaedza nepaanogona napo kurera Lemon nevamwe vake vana mushure mekufa kwaVaRichardson. Akaenderera mberi nekuwana diki inozivikanwa baba-nhanho-baba (ikozvino vanonoka) yevana vake. Lemon inobhadhara mutero kuna baba vokurera padivi pababa vake chaivo pese panowana mukana.
Nezve hama dzaDon Lemon:
Ndichiri kunyora nyaya yaDon Lemon yeUdiki isu takaita zvakanaka kutaura kuti akakura pamwe nehanzvadzi dzake Leisa naYma. Leisa ndiye aive mukuru pane vese hanzvadzi yaLemon uye "mumwe wake mukupara mhosva achiri kukura".
Zvinosuruvarisa kuti akarasikirwa neupenyu kuburikidza nekunyura netsaona achiredza padziva muLouisana. Padivi pake, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve imwe hanzvadzi yaRimoni Yma. Kunyangwe zvakadaro, hapana chiri kuramba chokwadi chekuti anogovera hukama hwepedyo neakakurumbira mukoma naamai.
Kure kure nevabereki vaDon Lemon uye vanun'una, ngationgororei madzitateguru ake uye midzi yemhuri. Kutanga, vanasekuru naamai vake vaive Frank Bouligney naMary Henrietta Jackson apo pasina marekodhi ababa vake nasekuru. Zvimwechetezvo, hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini vemutori wenhau, babamunini, babamunini, babamunini, nababamunini.
Hupenyu Hwega hwaDon Lemon:
Ndiani hunhu hweTV kunze kwenyika yehutori venhau uye vanhu vanomuziva sei kupfuura hunhu hwake muma studio uye mumakamuri enhau? Zorora sezvatinokuunzira chokwadi pamusoro peye munhu wake akafanana neyevanhu vanozvarwa pasi pePisces Zodiac chiratidzo.
Iye anodziya, anonzwa moyo, anofarira, anonakidza, akangwara, anovaraidza uye akazaruka pakufumura chokwadi pamusoro pehupenyu hwake hwakavanzika uye hwega. Chero iye anomira muTV kana asiri kushanda, anokwanisa kubatwa achiteerera mimhanzi, achifamba, achishandisa bhasikoro, achikwiza, achishandisa nguva yakanaka neshamwari dzake nemhuri, pakati pezvimwe zvinhu zvekufarira nezvaari kuita.
Wakanga uchiziva here kuti Don Lemon ine zvinoshamisa mambure akakosha emamiriyoni mazana matatu emadhora (3 times zvakaderera pane izvo zve Andrew Cuomo mukoma Chris) kubvira June 2020? Hukuru hweupfumi hwake isenti yemubhadharo uye mari yaakawana yaari hunhu hunonakidza paTV.
Nekudaro, hazvishamise kuti iye anofamba achienda nekudzoka kushanda pamota dzinotonhorera. Zvakare, iye aripo Sag Harbor Kumba kuNew York imba hombe mazana maviri nemazana manomwe emazana emakumbo mana. Iyo inozvirumbidza yepasi inotonhorera, ina 2,750 Deluxe yekurara, akanaka emukati dhizaini pakati pezvimwe zvinhu zvinokodzera mambo.
Chokwadi chaDon Lemon:
Ehe, takaita zvakanaka kukupa chokwadi nezvevabereki vaDon Lemon, Mukomana uye Lifestyle, chinyorwa ichi hachizove chakakwana kana tikatadza kupa zvimwe zvisingazivikanwe kana zvisinga zivikanwe chokwadi nezveanopa.
Chokwadi # 1 - Akashungurudzwa Wevana Pabonde:
Iyo Gay CNN Anchor inobvuma kubhinywa nemurume wake kana achiri mwana. Akazivisa pachena nhoroondo yehudiki hwake mu2011 paakataura nyaya inonzwisa tsitsi paCNN.
Chokwadi # 2 - Asingatyi Kudana CNN:
Icho chinozivikanwa chokwadi chekuti varume vezvenhau vanowanzotya kuratidza zvisiri izvo kana maitiro asina pundutso mumba yekutepfenyura avanoshandira. Ndimu yakanyatsosiyana nehukuru hwazhinji. Haafari nezvakawanda zvezvinhu zvinoitwa neCNN uye angave ane inzwi zvakanyanya nekushoropodza kwake mune izvo.
Chokwadi # 3 Pamusoro peNickname yake:
"Sour Lemon" raive zita remadunhurirwa rakapihwa mupepeti na Mutungamiri weAmerica, VaTrump. Mutungamiri neRimu havana kumbobvira vava nemazita akanaka kutanga kubva pamazuva ake emushandirapamwe. Ivo vaviri havadi mumwe uye havanganyara kubva kukanda invectives kune mumwe nemumwe.
Wakanga uchiziva here kuti TV Yevanhu inogovera yakafanana gore rekuzvarwa 1966 na Mike Tyson naDavid Schwimmer? Raive iro gore rimwechete iro maPampers vakaita zvakanaka kugadzira dhizaini yavo yekutanga.
Chokwadi # 5 - Zvipfuwo:
Iko kune chaiko kufarirwa kunoonekwa uko mukomana waDon Lemon anogovera muparidzi. Ndirwo rudo rwavo kuzvipfuyo kunyanya imbwa. Ivo vanoenda kunze nezvipfuwo pane dzakawanda nguva kusanganisira yekushambira mumahombekombe.
Chokwadi # 6 - Chitendero chaDon Lemon:
Kuziva kuti iye ngochani, iwe ungangofungidzira kuti iye haatendi. Paunenge uchitaura chokwadi pane izvi, zvakakosha kuti uzive kuti vabereki vaDon Lemon vakatanga kumurera zvinoenderana nechitendero chechiKristu zvitendero.
Panguva yekuisa Bio yake, iye Gay CNN Anchor haataure kuti muteveri kana mutendi waJesu Kristu. Iwe, Lemon unobvuma kutenda mune rimwe “simba rakakwirira.” Achitaura nezve pfungwa dzake nezve Chitendero, murume weMedia akambodaidza kuti anotenda iro Bhaibheri Naïve & Dangerous. Akaenderera… maererano neEewMagazine;
Pandaikura… ndaive nerudzi rweepiphany, iyo yakaita kuti nditende kuti Bhaibheri rinongova nezve zvidzidzo zvawakadzidza, kwete nezve zviitiko kana mazwi.
Kuti tiwane kukurumidza uye kupfupisa ruzivo nezve American muterevhizheni mutori venhau, tafunga kupfupisa Don Lemon's Biography mune yedu Wiki Inquiries uye Mhinduro.
Zita rizere: Don Carlton Lemon.
Zita rekudanwa: Sour Lemon.
Zuva rekuzvarwa: 1st zuva raKurume 1966.
Nzvimbo yekuzvarirwa: Baton Rouge muLouisiana, US
Baba: Mr. Richardson.
Amai: Katherine Clark.
Vanun'una: Yma naReisa. (Sista)
Hama: Frank Bouligney naMary Henrietta Jackson (vanamai vanasekuru).
Mukomana: Tim Malone.
Dzidzo: Baker High Chikoro uye Brooklyn College
Hobbies: Kuteerera mimhanzi, kufamba, kukwira bhasiketi, kuchinjisa uye kushandisa nguva yakanaka pamwe neshamwari nehama.
Hurefu: 6 tsoka kana 1.83 m.
CNN Mari: $ 125000 pagore.
Net Worth: $ 3 mamiriyoni.
Chitendero: Vaimbove chiKristu. Iye zvino ari asiri Mutendi.
Ndatenda nekuverenga kunonakidza kunyora pamusoro paDon Lemon's biography. At Childhood Biography, isu tinovavarira kurongeka uye kurongeka mubhizimusi redu rezuva nezuva rekuburitsa nyaya dzehucheche uye nhoroondo yechokwadi. Wati waona chero chinhu chinoratidzika kusanzwisisika muchinyorwa chino? ita zvakanaka kutibata nesu nekusiya meseji mubhokisi remashoko.